ထမင်းရှင်ပါစခွက်ရိုက်မယ်ဆိုတဲ့ ဖွေးဖွေး နဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်တို့ ရဲ့စာအချို့ ပေါက်ကြား...! - Thadin
HomeCELEBRITYထမင်းရှင်ပါစခွက်ရိုက်မယ်ဆိုတဲ့ ဖွေးဖွေး နဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်တို့ ရဲ့စာအချို့ ပေါက်ကြား…!
ထမင်းရှင်ပါစခွက်ရိုက်မယ်ဆိုတဲ့ ဖွေးဖွေး နဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်တို့ ရဲ့စာအချို့ ပေါက်ကြား…!
April 15, 2019 Kay Kay CELEBRITY Comments Off on ထမင်းရှင်ပါစခွက်ရိုက်မယ်ဆိုတဲ့ ဖွေးဖွေး နဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်တို့ ရဲ့စာအချို့ ပေါက်ကြား…!
သရုပ်ဆောင်နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်၏Facebookစာမျက်နှာအား Hackerများတိုက်ခိုက်၍ မိနစ်ပိုင်းခန့်အရေးကြီးအချက်အလက်များ ဖွင့်ချခံရ
ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင် နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်၏accအား ဧပြီလ (၁၅)ရက်နေ့ ည ၉နာရီခန့်အချိန်တွင် Hackerများတိုက်ခိုက်၍ မိနစ်၂၀ခန့် ထိန်းသိမ်းခံရပြီး အရေးကြီးအချက်အလက်အချို့ ဖွင့်ချခံခဲ့ရသည်ဟု သိရသည်။
နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်သည် လတ်တလောတွင် Facebook၌ ဂယက်ထလျှက်ရှိသော အနုပညာလောကတိုက်ပွဲများတွင် (ထမင်းရှင်ဆိုရင် ထမင်းချိုင့်လာပို့ကြ)ဟူသောပို့စ်ဖြင့် နာမည်ကြီးနေသူတစ်ဦးဖြစ်သည်။
အဆိုပါဂယက်များနှင့်တစ်ဆက်တည်း မကျေနပ်သူHackerအဖွဲ့မှ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်၏facebookစာမျက်နှာအား ယာယီထိန်းသိမ်းသွားခြင်းဖြစ်သည်။
Loginဝင်ထားသည့်ဖုန်းများကိုခန့်မှန်းခြင်းအားဖြင့် Hacker ၅ဦး ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သည်ဟုခန့်မှန်းထားပြီး မည်သူမည်ဝါဟုစုံစမ်းသိရှိခြင်းမရှိသေးကြောင်း သိရပါသည်။ မိနစ်(၂၀)ခန့် Hackerများရယူနိုင်ခဲ့ပြီးနောက် Email Addressကိုဖြုတ်သွားပြီး သရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေးနှင့်ပြောဆိုထားသည့်စာအချို့ ပရိသတ်အကြား ပျံ့နှံ့လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သရုပျဆောငျနှိုငျးယှဉျမွငျ့မိုရျ၏Facebookစာမကျြနှာအား Hackerမြားတိုကျခိုကျ၍ မိနဈပိုငျးခနျ့အရေးကွီးအခကျြအလကျမြား ဖှငျ့ခခြံရ
ဇာတျပို့သရုပျဆောငျ နှိုငျးယှဉျမွငျ့မိုရျ၏accအား ဧပွီလ (၁၅)ရကျနေ့ ည ၉နာရီခနျ့အခြိနျတှငျ Hackerမြားတိုကျခိုကျ၍ မိနဈ၂၀ခနျ့ ထိနျးသိမျးခံရပွီး အရေးကွီးအခကျြအလကျအခြို့ ဖှငျ့ခခြံခဲ့ရသညျဟု သိရသညျ။
နှိုငျးယှဉျမွငျ့မိုရျသညျ လတျတလောတှငျ Facebook၌ ဂယကျထလြှကျရှိသော အနုပညာလောကတိုကျပှဲမြားတှငျ (ထမငျးရှငျဆိုရငျ ထမငျးခြိုငျ့လာပို့ကွ)ဟူသောပို့ဈဖွငျ့ နာမညျကွီးနသေူတဈဦးဖွဈသညျ။
အဆိုပါဂယကျမြားနှငျ့တဈဆကျတညျး မကနြေပျသူHackerအဖှဲ့မှ နှိုငျးယှဉျမွငျ့မိုရျ၏facebookစာမကျြနှာအား ယာယီထိနျးသိမျးသှားခွငျးဖွဈသညျ။
Loginဝငျထားသညျ့ဖုနျးမြားကိုခနျ့မှနျးခွငျးအားဖွငျ့ Hacker ၅ဦး ဝငျရောကျတိုကျခိုကျသညျဟုခနျ့မှနျးထားပွီး မညျသူမညျဝါဟုစုံစမျးသိရှိခွငျးမရှိသေးကွောငျး သိရပါသညျ။ မိနဈ(၂၀)ခနျ့ Hackerမြားရယူနိုငျခဲ့ပွီးနောကျ Email Addressကိုဖွုတျသှားပွီး သရုပျဆောငျဖှေးဖှေးနှငျ့ပွောဆိုထားသညျ့စာအခြို့ ပရိသတျအကွား ပြံ့နှံ့လာခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။
လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး မုန်တိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်…!
This Month : 33192
This Year : 174649
Total Users : 533673
Total views : 2414102